ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): January 2012
အထူးသတိပြုရန် Rar Password - www.sysfilm.com
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:43 PM2comments:
ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:22 AM No comments:
ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။စိတ်ပါဝင်စားသူများဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:26 AM No comments:
အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:17 AM No comments:
Scan ကိုနှိပ်ပါ။ ထွက်လာတဲ့ list တွေထဲမှာမလို
အပ်ဘူးထင်တာတွေကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Fixed Checked ကို နှိပ်ပါ။ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။ အရင်တုန်းကလောက်တော့ မစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။ ကဲဗျာဒီလောက်ဆို သုံးရတာအဆင်ပြေလောက်ပြီထင်
ပါတယ်။ အသုံးတည့်မယ့် Software လေးပါ။ အောက်က Link မှာယူကြပါဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:03 PM No comments:
အောက်က Link မှာယူကြပါဗျာ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:09 PM No comments:
Labels: Downloader, Internet Tools, Software
အကြိုက်ချင်းမတူကြတဲ့အတွက် အသုံးဝင်မယ့်သူများ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အောက်က Link ကနေ
ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။ဒါလေးကို ကိုနေမင်းမောင် တင်ထားတာတွေ့
လို့ ဒေါင်းယူပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:55 PM No comments:
အဲဒီလို ပြသာနာတွေကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ ဒီ Installer လေးကလုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်အသုံး
၀င်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါဘဲ။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က Link မှာ
Advanced Installer 8.9
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:15 AM 1 comment:
အခု တင်ထားတဲ့ Software လေးကို အရင်ဦးဆုံး Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Crack
File လေးကို Copy ကူးပြီး။ C ထဲက Program Files ထဲက Selteco ထဲက Alligator Flash Designer 8
ထဲမှာ Paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အဲဒီ File လေးကို Double Click နှိပ်ပေးပါ။ ဒါဆို Full Version
ဖြစ်သွားပါပြီ။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:39 AM No comments:
Labels: Design, Editing, Software
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:28 AM No comments:
အထဲကနေ Sothink SWF to Video Converter ကိုရွေးပါ။ပြီးရင် Generate ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Serial
Key လေးကို ကူးပြီး ဖြည့်လိုက်ရင် Full Version လေးဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံး
Download form Ifile
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:12 AM 1 comment:
တင်ပေးနေကြ ပုံစံလေးအတိုင်းဘဲ Full Version တင်ပေးထားပါတယ်။
Keygen ပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင်လည်း အပိုင်6းပိုင်းခွဲပြီးတင်
ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ တစ်ပိုင်းမှာ 50MB ပါပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:29 PM No comments:
အသုံးပြုပုံကိုလည်း အထဲမှာ ပုံနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဆောင် ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုး ပါဘဲ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေဒေါင်းယူ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:19 PM No comments:
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက့် Link မှာ ယူကြပါဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:02 AM 1 comment:
တော်တော်များများမှာတော့ တင်ပြီးသားတွေတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့အခု
မှဘဲတင်ဖြစ်သွားတာပါဗျာ။ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link နှစ်မျိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာယူကြပါဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Angry Birds From Mediafire
Angry Birds From Ifile
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:53 PM No comments:
ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:09 PM No comments:
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို Post တင်တဲ့သူတွေဟာ မိမိ Post တစ်ခုတင်
လိုက်ပြီဆိုရင် အဲဒီ Post အပေါ်မှာ အခြားသော Member ၀င်တွေက စိတ်ဝင်စားရဲ့ လား သဘောကျရဲ့လား
ဆိုတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကိုဘဲစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ပြီး ဖတ်ကြပါတယ်။ မိမိတင်လိုက်တဲ့ Postမှာ Comment များများ ရေးပေးစေချင်ကြတာ Comment တွေကို ဖတ်ချင်ကြတာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ Feel လေးဘဲဗျ။
အခုနောက်ပိုင်း Post တင်ရတာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အားလျော့လာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့် လိုဘဲ ပုံမှန် Post တွေတင်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေလည်း အခုနောက်ပိုင်းတင်တာမတွေ့ရတော့ဘူးဗျာ။ Post တစ်ခု တင်တယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ MMiTD မှာ ကျွန်တော့်ကို စတင်ပညာ
သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာထက်ပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်တင်တဲ့ Post တစ်ခုအပေါ်မှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနား လည်နိုင်ရမယ်။ အဲဒီ Post မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Error မှန်သမျှကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမယ်။ အဲဒီလိုဖြေရှင်းပေး
နိုင်ပြီဆိုမှ Post တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ အဲဒီ Post အတွက် စာတွေရေးရ ရှင်းပြရနဲ့ တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့Post တစ်ခုအပေါ်မှာ အနည်းဆုံးတော့ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့စာလေးတစ်စောင်တောင် ချန်မထားခဲ့တာတော့ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့်လည်း Post တွေမတင်တော့ဘဲ ကိုချစ်ရဲ့ Post မှာဘဲ တစ်သလောက်မှတ်သလောက်လေးနဲ့ ကိုချစ်ကို ၀င်ပြီးကူညီပေးနေတာ ကြာပြီဗျာ။ ရှေ့ဆက် Post တွေတင်ဖို့လည်း အားတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ ပထမတစ်ခေါက် တင်လိုက်တဲ့ Post အတွက် Comment တွေဟာ ဒုတိယ Post အတွက် အင်အားတွေပါဘဲ။ ဒီ တစ်ခေါက် Post တင်ဖြစ်တာတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးအားယူပြီးတင်ရပါတယ်။ ထွက်လာမယ့် ရလဒ်ကတော့ ဘယ်လိုလည်းတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကလည်း Software ကောင်းကောင်းလေး တွေရလာရင် MMiTD ကညီကိုမောင်နှမတွေကို မျှဝေပေးချင်နေတော့လည်း ဗျာ…………
လေကြောတွေရှည်နေတာနဲ့ဘဲ လိုရင်ကို မရောက်သေးပါဘူး။ အခုတော့ ပြောပြချင်တာလေးတွေပြောပြလိုက်ရလို့ နည်းနည်းတော့စိတ်ပေါ့သွားတာပေါ့ဗျာ။ လိုရင်ကိုစပြီးပြောပြပါတော့မယ်။
ဒီ Software လေးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျောင်းတုန်းကဆရာမက သူ့ရဲ့ Laptop မှာ Partition တစ်ပိုင်းဘဲပိုင်းပေးထားလို့ နှစ်ပိုင်းပိုင်းချင်လို့ ကျွန်တော့်ကိုအကူအညီတောင်းရာ
ကစတာဘဲဗျ။ သူတင်ထားတဲ့ Laptop လေးက Window7x 86bit တင်ထားတာဗျ။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ Partition Software တွေနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။
Partition Software တွေက 86 ကို Support မလုပ်နိုင်ကြဘူးဗျာ။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ကိုချစ်ကိုဘဲအကူအညီတောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ကိုချစ်ရှာပေးတဲ့ Software လေးပါဘဲ။
အသုံးပြုပုံလေးကလည်းလွယ်ကူရိုးစင်းလွန်းပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာမရဲ့ Laptop လေးကို Partition ပိုင်းလိုက်တာ 15 မိနစ်တောင်မကြာပါဘူးဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ကျွန်တော်သဘောကျတာနဲ့ဘဲ ကျန်တဲ့ Window တွေကိုလိုက်စမ်းကြည့်တော့ အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာ Window XP . Window7, Vista အားလုံးကို Support လုပ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကိုလည်း အားလုံးနားလည်အောင် ပုံလေးနဲ့တကွ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမအနေနဲ့ Go to main Screen လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Partition ပိုင်းထားတာ C,D,E,F ဆိုပြီး အပိုင်းလေးပိုင်းကိုတွေ့မှာပါ။
နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော်က E:Backup ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးကို နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖန်တီးပြ
1.ကိုယ်ပိုင်းချင်တဲ့အပိုင်းလေးကို Select ပေးပြီးရင်
ဒါဆိုရင် အားလုံးမြင်ရတဲ့တိုင်းဘဲ ကိုယ်ပိုင်းချင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ်လာပါပြီ။
1. အဲဒီမှာပါတဲ့အဝိုင်းလေးနားမှာ Mouse ကိုထားပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ နောက်ထပ် Partition တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့
2. Partition Size မှာ မူလရှိနေတဲ့ ပမာဏကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
3. Unallocated Space After ကတော့ ထပ်မံဖန်တီးလိုတဲ့ Partition ပမာဏကို အတိအကျသတ်မှတ်ပေးရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (1GB x 1024MB) မသိရှိသေးသူများအတွက်ပါ။ကိုယ်က နောက်ထပ် Partition မှာ 50GB ထားချင်တယ်ဆိုရင် 50 x 1024 = 51200MB ရိုက်ထည့်ရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Unallocated ဆိုတဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ်လာပါပြီ။ Ok နှိပ်ပါ။
1. Unallocated ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Partition အပိုင်းတစ်ပိုင်း ဖြစ်လာဖို့ ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Unallocated ကို Select ပေးပါ။
2. Created နှိပ်ပါ။
3. Partition Label သတ်မှတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကတော့ ဥပမာအနေနဲ့ Data လို အမည်ပေးထားပါတယ်။
4. Driver Letter သတ်မှတ်ပေးရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Ok နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ပါဘဲ။ မိမိတို့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Partition လေးဟာပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ။
1. ဒါဆိုရင် Apply ကိုနှိပ်ပါ။
2. Shut down the computer after changes are applied. မှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
3. Yes နှိပ်ပါ။
လုပ်ငန်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Window ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Partition ပိုင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက် ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါ။ 100% ပြည့်ပြီး Window တက်လာရင်တော့ မိမိ ပိုင်းထားတဲ့
Partition ကို စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
ကျွန်တော်ရေးသားမှုအပေါ်မှာ အဆင်မပြေတာနားမလည်တာရှိရင် အရေးအသားကောင်းမွန်စွာမရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက် နားလည်းပေးစေချင်ပါတယ်။
ထွက်လာမယ့် ရလဒ်လေးကိုတော့ဗျာ !!!!!!!!!!!!!!!!
အောက်က Link မှာ ယူကြပါနော်။
EASEUS Partition Master 9.0.0 Professional Edition
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:04 AM3comments:
Serial Key ကို အထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်အောက်
က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:29 PM2comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟာ ဘုရားအဖြစ်နဲ့ ၄၅ နှစ် နေပြီး မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု၊
ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ ဘီစီ ၅၄၃ မှာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူပါတယ်၊
ဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ ၄၅ နှစ်အတွင်း တာဝန်ကြီး ၂ ရပ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၂၂ နာရီ
မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှ နေမအား ညမနား လူသား, သတ္တ၀ါတို့၏ ကောင်းကျိုးကို
အဲဒီ တာဝန်ကြီး ၂ ရပ်ကတော့..... (၁) ဓမ္မကို ဟောပြောခြင်း, ဖြေဆိုခြင်း
(၂) သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ထို မြတ်ဗုဒ္ဓ
ဟောပြသည့်ဓမ္မအတိုင်း လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူများကို
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ရန်အတွက်
ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဥပဒေ တွေ မရှိပါဘူး၊ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ခြင်း,
တရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ခြင်း, သံဃာကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ခြင်း
လို့ ခေါ်တဲ့ သရဏဂုံ သုံးပါးကို လက်ခံလိုက်လို့ ရှိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး အတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်း ၅ မျိုး
(၁) သက်ရှိလူသား တိရစ္ဆာန် တို့ရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
(၂) သူတပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
(၃) ကာမဂုဏ် ဖေါက်ပြန်မှု, အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်မှု မှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
(၄) မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
(၅) မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း, ရောင်ဝယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်းဆို တဲ့
စည်းကမ်း ၅ မျိုးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ချမှတ်သည့် ဒီစည်းကမ်း ၅ မျိုးကို ကြည့်ရင် မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ
လူသားတို့ရဲ့ အသက်, အိုးအိမ်, စည်းစိမ်, ချမ်းသာ, လုံခြုံဖို့၊
အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့၊ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သစ္စာတရားထွန်းကားဖို့၊
လူသားတို့ရဲ့ ဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း မှီဖို့ အရေးကို မျှော်တွေးကာ
အထက်ပါစည်းကမ်း ၅ ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။
လူသားတွေဟာ အပျော်ကြူးခြင်း, အလိုရမက်ကြီးခြင်း,
ကြောက်စိတ်များခြင်းတို့ကြောင့် မိမိတို့ဘ၀ အတွက် အားကိုးရာတွေကို
စိတ်ကူးပုံးဖေါ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်ကြပါတယ်၊ စိတ္တဇ အတွေးတွေကို
ပုံဖေါ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်လက်ခံနေတာကို မြတ်ဗုဒ္ဓက နှစ်သက်တော်မမူပါဘူး၊
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် အထင်စွဲအာရုံ ကိုးကွယ်မှုမျိုးစုံကို
စွန့်လွှတ်ရမှာဖြစ်သလို အတွေးစွဲအလီလီ ယုံကြည်မှုအရပ်ရပ်ကိုလည်း
ပယ်စွန့်ကြရပါလိမ့်မယ် သို့ဖြစ်၍ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ဖြစ်ရေးအတွက်
ဥပဒေသ မူကြီး ၅ ရပ်ကို စံပြု သတ်မှန်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်.......
(၂) စောင့်ထိန်းမှု သီလရှိရမည်။
(၃) ကောတုဟလ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ။
(၄) ကံတရားကို ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်။
(၅) သာသနာတော်ပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှုကို မရှာမှီးရ- ဆိုတဲ့
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် မူကြီး ၅ ရပ်ကို အဂ္ဂုင်္တ္တရနိကာယ်မှာ
တဆင့်တက်ပြီး အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါတယ်
(၁)ယုံကြည်မူသဒ္ဓါတရားရှိရမည်-ဆိုသည်မှာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါး
တို့၌ ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် တရားစစ် တရားမှန် သံဃာစစ် သံဃာမှန် ဖြစ်ကြောင်း
ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ စိတ်ရှိရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
(၂) စောင့်ထိန်းမူ သီလ ရှိရမည်- ဆိုသည်မှာ ၀ါရိတ္တ သီလ လို့ခေါ်တဲ့ ငါးပါး,
ရှစ်ပါး သီလ နဲ့ စာရိတ္တ သီလလို့ ခေါ်တဲ့ လင်ကျင့်ဝတ်, မယားကျင့်ဝတ်,
ဆရာ့ကျင့်ဝတ်, တပည့်ကျင့်ဝတ်, မိဘ ကျင့်ဝတ်, သားသ္မီး ကျင့်ဝတ်,
အထက်လူကြီးကျင့်ဝတ်, အောက်လက်ငယ်သားကျင့်ဝတ်- စတဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့
ကျင့်ဝတ်သီလ များနဲ့ ပြည်စုံရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ နံပါတ် ၂ ဥပဒေသ နှင့်
မြတ်ဗုဒ္ဓက မလုပ်ဘဲနေရမှာကို မလုပ်ဘဲနေရဲတဲ့ သတ္တိ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို
လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိ လူသားတို့ရဲ့ စိတ်မှာမွေးမြူနိုင်ဖို့
(၃) ကောတုဟလမင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ-ဆိုသည်မှာ အချို့သောလူများဟာ”
အိမ်မြောင်စုတ်ထိုးရင်… လာဘ်ကောင်းတယ်” “ ကျီးကန်းလာနားရင်….
နိမိတ်မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ ကောတုဟလမင်္ဂလာကို ယုံကြည်လက်ခံကြပါတယ်၊
မြတ်ဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် ရက်ရာဇာ, ပြဿဒါး, ကျီးကန်းလာခြင်း,
အိမ်မြောင်စုတ်ထိုးခြင်း, နေကြတ်, လကြတ်- စတာတွေကြောင့် ကောင်းကျိုး
ဆိုးကျိုး ရှိတယ်ဆိုတာတွေကို လက်မခံဖို့ နံပါတ် ၃ ဥပဒေသကို
ကောင်းကျိုးလိုလားသူ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကို လုပ်ရမှာဖြစ်သလို
မကောင်းကျိုး မခံစားလိုသူတွေ အတွက် မကောင်းတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆို
တွေးအကြံများကို မပြုလုပ်မိဖို့လိုပါတယ် အတွေးအကြံများက မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ
တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ကောင်းကျိုးကို မျှော်လင့်နေကြတာဟာ “ကောင်းကင်က ရေစီး
မြေ ကီး က လသာမယ့်အချန်တွေကို စောင့်နေကြတာနဲ့ “ အတူတူပါပဲ။
(၄) ကံတရားကို ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်-ဆိုသည်မှာ အကြင်မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုး၏
ထိုအပင်ကို သာလျှင် ရိတ်သိမ်းရ၏- ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အတိုင်း
ကောင်းကံလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးခံစားရ မကောင်းကံလုပ်ရင်
သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ကြည့်ပါ.. ဒီသစ်ပင် ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့…
(၁) လုံလောက်တဲ့ နေရောင်ခြည်
(၂) လုံလောက်တဲ့ ရေဓာတ်
(၃) ကြီးထွာ သီးပွင့်ရမယ့် အချိန်အခါ-
ဒီအကြောင်းတရား ၃ မျိုး ပေါင်းဆုံမှ သစ်ပင်ဟာ ရှင်သန်ကြီးထွား
ပွင့်သီးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကို ဗီဇနိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဗီဇနိယာမလိုပါပဲ
မိမိတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းကံဆိုးကံတွေဟာ ပြုလုပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့
တစ်ပြိုင်နက် မိမိတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သတ္တိကလေးတွေချန်ထားရစ်ပြီး
ပျောက်သွားကြပါတယ် မိမ်ိတို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒီသတ္တိ ကလေးတွေဟာ
စေတနာ သမင်္ဂီတာ, ကမ္မ သမင်္ဂီတာ, ဥပဋ္ဌာန သမင်္ဂီတာ, ၀ိပါက သမင်္ဂီတာ ဆိုတဲ့
အကြောင်းတရား ၄ မျိုး ပေါင်းစုံတဲ့ အချိန်မှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုအဖြစ်
ဧကန်အကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် ဒီကမ္မနိယာမ ရဲ့
သဘောတရားကို ယုံကြည်လက်ခံသူ ဖြစ်ရမယ်လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
(၅) သာသနာတော် အပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှု ကို မရှာမှီးရ-ဆိုသည်မှာ လူများဟာ
အပျော်ကြူးခြင်း အလိုကြီးခြင်း ကြောက်စိတ်များခြင်း
စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းတွေကြောင့် သာသနာတော်ရဲ့ ပြင်ပဖြစ်တဲ့
နတ်ကိုးကွယ်ခြင်း ဘိုးတော် မယ်တော် ကိုးကွယ်ခြင် အင်း အိုင် လက်ဖွဲ့
ဗေဒင် မန္တာန် ကို အားထား ယုံကြည်ခြင်း စတဲ့ သာသနာတော်ပြင်ပ ကိုးကွယ်ရာ
တွေကို ရှာမှီး ကိုးကွယ်နေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အတွင်း ၃၇ မင်း အပြင် ၃၇ မင်း သူရဿတီ မယ်တော်
စတဲ့ နတ်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် မြန်မာပြည်ဖြစ်နတ်များ
အစိမ်းသေ နတ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဗြဟ္မဏ တို့
စိတ်ကူးပုံဖေါ် ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ တကယ် မရှိတဲ့ သူရဿတီ နတ်သ္မီးကို ပိဋကတ်
သုံးပုံစောင့် နတ်သ္မီး အဖြစ် ယုံကြည် ကိုးကွယ်နေကြတာဟာ ပိဋကတ် သုံးပုံကို
လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်များကို စော်ကားခြင်းဖြစ်သလို မိမိ
ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကို အသိအမှတ် မပြုရာလဲ ရောက်ပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ အဆိုအမိန့်ကို ပြောပြချင်ပါတယ် “
ထာဝရ ဘုရားက လူတို့ကို ဖန်ဆင်းထားခြင်းမဟုတ် လူတို့ကသာ ထာဝရ ဘုရားကို
ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်” လို့ ဆိုပါတယ် ဒီလိုဆိုရင် ဦးဇင်းက လဲ
ပြောချင်ပါတယ် နတ်တို့ က လူတို့ကို စောင့်ရှောက်ထားခြင်းမဟုတ် လူတို့က သာ
နတ်တို့ ကို စောင့်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပ၊ဲ
ဒါကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မှန်ရင် သာသနာပ ကိုးကွယ်မှုကို မရှာရလို့
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ အတွက်….. ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါ တရားရှိရမည်
,စောင့်ထိန်းမှု သီလ ရှိရမည်, ကောတုဟလ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ, ကံတရားကို
ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်, သာသနာတော်ပြင်ပ ကိုးကွယ်မှု မရှာရဆိုတဲ့ ထေရ၀ါဒ
ဗုဒ္ဓဘာသာ မူ ၅ ချက်ကို ဦးထိပ် ပန်ဆင်၍ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ သဘောတရားဖြစ်သော ဆင်းရဲ
ခြင်းမှ ချမ်းသာခြင်းသို့၊ မကောင်းမှု မှ ကောင်းမှုသို့၊ အမှောင်မှ
အလင်းသို့၊ မသိမှုမှ သိမှုသို့၊ ဒုက္ခအတွင်းမှ ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရာသို့
ရောက်အောင် အသိ အကျင့် ဘက်စုံမြှင့်၍ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်အောင်
http://www.dhammaweb.net/notes/view.php?id=30 မှ ပြန်လည်ကူးယူ ပူဇော်ပါသည်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:39 PM 1 comment:
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:50 AM2comments:
ပါတယ်ဗျာ။Serial , Crack , Keygen တွေ ဘာမှမလိုပါဘူး ဒီအတိုင်း Install လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ စိတ်ဝင်စား
တယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:49 PM No comments:
Labels: Converter, Portable
ပြီးတော့ Zawgyi ရော Myanmar3 (Unicode) နှစ်မျိုးလုံးကို Supportလုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီ Dictionary လေးကို ကိုစိုးမင်း ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ Programmer များကိုဂုဏ်ပြူသော
အားဖြင့်တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူ
နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးမှာတင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:21 AM No comments: